Semalt विशेषज्ञ: वेबहार्वेस्ट, तपाईंको व्यवसायको लागि5प्राथमिक लाभहरू
Scraped डाटा व्यापारीहरुलाई स्मार्ट निर्णय गर्न सक्षम गर्दछ जुन सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ। यद्यपि, धेरै जसो मार्केटरहरू र प्रबन्धकहरू सीमित कार्यहरू र सुविधाहरूका कारण साधारण वेब एक्स्ट्रक्टरहरू प्रयोग गर्नबाट अलग राख्छन्। ती उपकरणहरू जस्तो नभई, वेबहर्वेस्ट एक भरपर्दो र प्रामाणिक डाटा निकाल्ने सेवा हो। यसले व्यापारीहरूलाई डाटा स collect्कलन र विश्लेषण गर्न सक्षम गर्दछ, र अत्यधिक डरलाग्दा कार्यहरूसँग सम्झौता गर्न। यो सेवाले दुबै टेक्स्ट प्रोसेसिंग र HTML प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ र मनमानी वेब पृष्ठहरूबाट जानकारी निकाल्दछ। यसको प्रमुख लाभहरू तल उल्लेख गरिएको छ:
१. तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको बारेमा जानकारी सlects्कलन गर्नुहोस्:
वेबहार्वेस्टको साथ, तपाईं सजिलैसँग तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू, उनीहरूका उत्पादनहरू, सेवाहरू, मार्केटि strate रणनीतिहरू, उभरते बजारहरू र भर्खरको प्रवृतिको बारेमा जानकारी संकलन गर्न सक्नुहुन्छ। संक्षेपमा, तपाइँ तपाइँको प्रतिद्वन्द्वी को बारे मा सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ र तपाइँको व्यापार बढाउन बुद्धिमानी निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट जानकारीले भरिएको छ, र त्यहाँ प्रतिस्पर्धीहरूको एक ठूलो संख्या संग सम्झौता गर्न को लागी छ। WebHarvest तपाइँको तपाइँको मुख्य प्रतिस्पर्धी को बारे मा डेटा स collect्कलन र व्यवस्थित गर्न को लागी सजिलो हुनेछ।
वेबहार्वेस्ट यसको मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजीको लागि राम्रोसँग परिचित छ र डाटा संरचित र संगठित फाराममा स्क्र्याप गर्न सक्दछ। तपाईंले भर्खरै डाटा हाइलाइट गर्नुपर्नेछ वा यूआरएल घुसाउन जुन तपाईंले स्क्र्याप गर्न चाहानुहुन्छ, र वेबहर्भेस्टले यसको कार्यहरू सुरू गर्न सुरू गर्दछ र तपाईंलाई केही मिनेटमा पढ्न योग्य र स्केलेबल डाटा दिनेछ।
Fast. द्रुत र भरपर्दो परिणामहरू:
एक व्यापारी को लागी, छोटो समय मा जानकारी भेला गर्न र निकाल्न महत्वपूर्ण छ। कहिलेकाँही उनीले समयसीमा भेट्नुपर्दछ र धेरै चुनौतिहरूको सामना गर्दछ। यस्तो अवस्थामा तपाईं वेबहार्वेस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको काम सिध्याउन सक्नुहुन्छ। यस उपकरणको सब भन्दा विशिष्ट सुविधाहरू मध्ये एक यो केहि सेकेन्डमा तपाइँको लगत फसल गर्दछ र एक पटकमा १२०० कार्यहरू गर्न सक्छ। अर्को शब्दहरु मा, तपाईले चाहानु भएको धेरै वेब पृष्ठहरु लाई खुवाउन सक्नुहुन्छ र केहि घण्टामा तपाईको कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको डेडलाइनलाई सहजै साथ भेट्नुहुनेछ। थप रूपमा, यस उपकरणले प्रदान गर्ने परिणामहरू सही र विश्वसनीय छन्। वेबहार्वेस्टले सबै साना र ठूला त्रुटिहरू स्वचालित रूपमा फिक्स गर्दछ र तपाईंलाई त्रुटि रहित र पढ्न योग्य जानकारी हुन्छ।
Shopping. लक्षित शपिंग वेबसाइटहरु:
यदि तपाईंले भर्खरै शपिंग वेबसाइट सुरू गर्नुभएको छ र अमेजन र eBay बाट जानकारी संकलन गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले WebHarvest रोज्नु पर्छ। यस सेवाको साथ तपाई सजिलै हजारौं उत्पादनहरू, उनीहरूका विवरणहरू, छविहरू र ग्राहक समीक्षाका बारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सबै डाटा तुरुन्तै स्क्रॅप गरीन्छ र तपाईं यसलाई तालिकाहरू र सूचिहरूको रूपमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। सहि डाटाले विश्वलाई नियम दिन्छ र वेबहार्वेस्टले भरपर्दो र सटीक नतिजा दिन्छ, छोटो समयमा तपाईंको व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्दछ।
एक व्यापारीले ठूलो संख्यामा कार्यहरू प्रबन्ध गर्नुपर्दछ र एक मिनेटमा वेब पृष्ठहरूको लोड स्क्र्याप गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। उसले / उनीले अनलाइन स्टोरहरू र सामाजिक मिडिया साइटहरूबाट डेटा स to्कलन गर्नुपर्नेछ। वेबहार्वेस्टसँग तपाईंको काम सजिलो बनाउन अत्याधुनिक प्रविधि छ। तपाईं कुशल परिणामहरूको लागि यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र असंख्य वेब पृष्ठहरू एक पटकमा स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। थप, तपाईं यस सेवाको साथ भौगोलिक र स्थलाकृतिक जानकारी लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई प्रयोग योग्य ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ।